Faah Faahin:- Qarax xoogan oo caawa ka dhacay wadada Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah Faahin:- Qarax xoogan oo caawa ka dhacay wadada Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax xoogan oo caawa fiidkii ka dhacay agagaarka goob laga dukaamaysto oo ku taala wadada Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho, iyadoona qaraxaasi ay warar kala duwan kasoo baxayaaan.
Warar qaar ayaa waxay sheegayaan in qaraxaasi uu ahaa mid walxaha qarxa lagu soo xiray gaari uu la socday wasiirka dhalinyaradda iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Nuux, halka warar kalena ay sheegayaan inuu ahaa Bam gacmeed lagu weeraray gaarigaasi oo taagnaa agagaarka goob laga dukaameysto oo ku taalo wadada Maka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhaawacantay ilaa 3 qof oo shacab ah, kuwaas oo sida la sheegay maraayay agagaarka goobta uu qaraxa ka dhacay iyo sidoo kale mid ka mid ah ilaalada wasiirka.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa islamarkiiba goobta soo gaaray, waxaana ay halkaasi ka sameeyeen baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen.
Howlgalkaasi ayaa waxaa lagu soo qab-qabtay dad gaaraya ilaa 15 qof, kuwaas oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen qaraxaas.
Dhinaca kale, warar kale aan la xaqiijin ayaa sheegaya in qaraxaasi lala damacsanaa in lagu qaarjiyo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Nuux, kaas oo xilliga uu qaraxa dhacaayay ka adeeganayay Carwo u dhow goobta uu qaraxa ka dhacay.